Igumbi Lokulala Eliphelele elingu-3 elinendawo yokugezela engu-2.5 yokugezela yaseTownhome w/ Patio
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-Evan
I-townhome enezitezi ezimbili ngaphakathi komphakathi owine imiklomelo weBrightwalk. Kutholwe imayela ukusuka e-Uptown Charlotte, e-Charlotte Music Factory, uhambo lwemizuzu eyi-10 ukuya ekhempasini ezayo yamahektha ayi-100 e-Camp North End Innovation Corridor, izitolo ezidayisa utshwala zendawo, izitolo zekhofi, izindawo zokusebenzela kanye nezindawo zokudlela.
I-townhome ine-floorplan evulekile enendawo yomlilo ethokomele, izinto zasekhishini zensimbi engagqwali, ama-granite countertops, indawo yokudlela yasekuseni, igumbi lokulala eliphakeme elinekhabethe langokwezifiso, namagumbi okulala amabili ezivakashi.
Igumbi lokuhlala linokugeza okuyingxenye ngaphansi kwezitebhisi, indawo yomlilo kagesi ene-TV ehlakaniphile engu-60 inch, isitulo segumbi lokuphumula, kanye nosofa omkhulu oyingxenye wokusingatha izivakashi noma ukuvele uphumule.
Ikhishi ligcwele zonke izinto ezijwayelekile ezidingwa ngabaqashi. Izinto zensimbi engagqwali, izitsha, izibuko, amapuleti, amathuluzi okubhaka, amathuluzi okupheka, isethi yommese, amabhodwe namapani, i-Ninja blender, i-Oster blender, nomakhi wekhofi.
Ivulandi elingaphandle linikeza igrill yegesi, i-sunshade, izibani zezintambo ze-patio, nendawo yokuhlala ukuze ujabulele isimo sezulu esipholile saseningizimu yeNorth Carolina.
Indawo yokudlela kanye ne-breakfast bar ingasetshenziswa njengendawo evulekile yehhovisi.
Sicela uqaphele - Uma ucela, igumbi lokulala lezivakashi elincane lingashintshwa libe indawo yehhovisi esebenzayo yezivakashi ezibhukha isonto noma ngaphezulu ukuze zihlale ingqikithi. Sicela uxhumane nomsingathi ukuze uthole imininingwane.
Ikamelo ngalinye line-TV engu-50 inch+, ifeni elawulwa kude ekwazi ukucimeka, omatilasi be-Nectar memory foam kanye nama-closets angawodwana. Igumbi lokulala eliphakeme linombhede wenkosi waseCalifornia, ikhabethe elijwayelekile lokungena, kanye negumbi lokugezela eligcwele eliyimfihlo. Amanye amakamelo amabili okulala anemibhede yezindlovukazi ezimbili futhi ahlanganyela ukugeza okugcwele.
Isivakashi esisodwa kuya kwezimbili ezengeziwe zingalala kusofa osesigabeni segumbi lokuphumula. Usofa oseceleni awufaki umatilasi wokudonsa ngaphandle kanti i-townhome ayinawo umatilasi womoya.
I-HDTV ene- I-Amazon Prime Video, Hulu, I-Netflix
Itholakala khona kanye phakathi kwe-77 kanye ne-277 endaweni yase-Brightwalk ewine imiklomelo engaphansi kwemayela ngaphandle kwe-Uptown Charlotte kanye ne-Music Factory. I-townhome ingaphansi kohambo lwemizuzu eyi-10 ukuya emhubheni wokuqamba we-Camp North End, izindawo zokuphuza utshwala zasendaweni, izindawo zokudlela, izitolo zekhofi kanye nezindawo zokusebenza ngokubambisana.
Umsingathi uyakujabulela ukuzijabulisa nesivakashi. Ngiyajabula ukunikeza imininingwane yokuxhumana nganoma imiphi imibuzo noma izinkathazo.